"Fararano Golden-2019": ny fijerena lehibe indrindra ny zava-bitan'ny fambolena dia namintina ny valiny - magazine "Potato System"
Tena vaovao hetsika
"Fararano Golden-2019": ny fanadihadihana lehibe indrindra amin'ny zava-bitan'ny fambolena dia namintina ny valiny
от Rafitra ovy
Nanomboka ny 9 ka hatramin'ny 12 Oktobra 2019, tao Moskoa, eo amin'ny faritry VDNKh, dia natao ny fampirantiana Rosiana agro-indostrialy faha-21 "Golden Autumn", nokarakarain'ny Ministeran'ny Fambolena ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Ny tontalin'ilay fampirantiana "Golden Autumn-2019" dia sahabo ho 30 metatra toradroa. metatra ary nandrakotra ny faritra rehetra amin'ny fambolena. Raha atotaly dia faritra 50 ao Russia sy solontenan'ny firenena vahiny 17 no nandray anjara tamin'ny fampirantiana. Raha atotaly dia mpihetsiketsika mihoatra ny 1500 no naneho ny fahombiazany tamin'ny fararano volamena. Maherin'ny 140 ny olona nitsidika ny fampirantiana tao anatin'ny efatra andro.
Ny lanonam-panokafana dia natrehan'ny praiminisitry ny federasiona rosiana Dmitry Medvedev, ny praiminisitra lefitry ny federasiona rosiana Alexei Gordeev, ny Tale jeneralin'ny Fikambanana mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena (FAO) Qu Dongyu ary ny minisitry ny fambolena ao Russia Dmitry Patrushev.
Araka ny fomban-drazana, nanokatra ny fampirantiana tamin'ny alin'ny Andron'ny mpiasa tao amin'ny indostrian'ny fambolena sy ny fikirakirana, Dmitry Medvedev dia nanolotra mari-panjakana sy anaram-boninahitra ho an'ny mpiasa tsara indrindra amin'ny indostria.
Taorian'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fararano Golden 2019, dia fantatr'ireo solontena ny fampirantiana ny fampirantiana, izay nantitranterina ny marika isam-paritra tsara indrindra novokarina avy amin'ny akora simika mahasoa azy ireo. Ny solontenan'ny faritra dia nilaza tamin'ny praiminisitry ny federasiona rosiana ihany koa momba ny tetikasa mahomby indrindra ampiharina amin'ny sehatry ny fambolena.
FIZARANA FAMPIANARANA ASA REGION OF RUSSIA. TANINDRAZANA Vahiny
Ity dia iray amin'ireo fizarana lehibe amin'ny fampirantiana, izay ahitàna vondron'olona 48 ao amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny velarany 5 XNUMX metatra toradroa ny velarany. metatra nanolotra tetikasa fampanjariam-bola lehibe napetraka any amin'ny faritra, ary koa naneho ny santionany tsara indrindra amin'ny vokatra. Ny fampirantiana lehibe indrindra tamin'ity taona ity dia natolotry ny Faritanin'i Stavropol, ny Faritra Yaroslavl ary ny Repoblikan'i Tatarstan.
Orinasa avy any Austria, Belarus, Great Britain, Germany, Denmark, Ireland, Spain, Italia, China, Netherlands, Poland, Ukraine, France, Czech Republic, Switzerland, Japan dia nandray anjara tamin'ny faritra samihafa tamin'ny fampirantiana. Serbia dia lasa firenena mpiara-miasa amin'ny faribolana volamena tamin'ity taona ity. Ny fampiroboroboana ny repoblika dia nahaliana ny mpitsidika: ny agrarians Serba, ankoatry ny zavatra hafa, dia nampahafantatra ny vahinin'ilay fampirantiana ny vokatra sakafon'izy ireo.
FIAINANA SY FIVORIANA
Ny fizarana "Fiompiana sy fiompiana" dia nampiseho ny vokatry ny asa fifantenana sy ny fiompiana an-taonany maro. Ny fampirantiana azy, izay nibodo faritra 4 metatra toradroa. metatra, orinasa 150 eo ho eo no naneho ny zava-bitany.
FITAOVANA FAMBOLENA SY FITAOVANA HO AN'NY AIC
Tamin'ity taona ity, orinasa maherin'ny 90 avy any Russia sy firenena vahiny dimy no nitondra milina fambolena sy vokatra mifandraika amin'izany. Maherin'ny 2 metatra toradroa no natokana ho an'ilay fampirantiana. metatra.
Ankoatr'izay, ao amin'ny fizarana "Fitaovana hiompiana biby. Fitsaboana biby. Fahano ”ny vokatr'izy ireo dia nasehon'ny 64 mpamatsy sy mpanamboatra Rosiana, ary koa ireo mpiara-miasa aminy avy any Austria, Belarus ary Alemana.
Vokatra famokarana ho an'ny vokatra. FIOMPIANA NY VOA
Orinasa 41 hafa koa no nanolotra ny zava-bitany tao amin'ilay fizarana hoe “Midika amin'ny famokarana ho an'ny famokarana vokatra. Ny voa maniry ": ny zezika farany, ny vokatra fiarovana ny zavamaniry ary ny vokatra hafa ilaina hampitaovana ireo orinasa ao amin'ny orinasa indostrialy agro-indostrialy ary hampiditra teknolojia maoderina ho an'ny famokarana, fitehirizana ary fanodinana voalohany ny vokatra voly.
Ny fampiratiana dia niavaka tamin'ny alàlan'ny programa fandraharahana manankarena. Nandritra ny 4 andro tamin'ny Fararano Golden dia hetsika 75 mahery no natao tao amin'ny pavilion faha-50 an'ny VDNKh.
Ny palitao misy ny lohahevitra momba ny fandaharan'asa dia nandrakotra ireo olana maika indrindra mifandraika amin'ny fanjakana ankehitriny sy ny fampandrosoana bebe kokoa ny faritra samihafa amin'ny sehatry ny fambolena.
Omeo NY TANINDRAZANA TSY NY SAKAFO IHANY KOA SY NY VOA
Tamin'ny andro voalohan'ny fampiratiana, nahasarika ny mpitsidika ny latabatra boribory "Fampiharana ny drafitra feno momba ny fampandrosoana ny famokarana sy ny famokarana masomboly any Russia", karakarain'ny Minisiteran'ny Fambolena ao Russia. Ny hetsika dia natrehan'ny solontenan'ny sampan'ny Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr", mpikambana ao amin'ny National Union of Breeders and Seed Breeders (NSSiS), notarihan'ny Tale Jeneraly A.V. Mikhilev, mpamokatra fambolena avy amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena, ny fiarahamonina siantifika.
Ny fanokafana ny latabatra boribory dia nanamarika ny lefitry ny minisitry ny fambolena voalohany an'ny Federasiona Rosiana Dzhambulat Khatuov fa mba hamahana ny olan'ny fiantohana ara-tsakafo eto amin'ny firenena dia zava-dehibe ny hanomezana azy io tsy amin'ny sakafo ihany fa amin'ny masomboly. Mbola misy fiankinan-doha lehibe amin'ny voa nafarana ho an'ny vokatra toy ny betiravy (97%), katsaka (55%), tanamasoandro (60%). Ny praiminisitra lefitra voalohany dia nanentana ny hampifangaro ny fihetsiky ny Minisiteran'ny Fambolena, ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Siansa ary ny Akademia Rosiana misahana ny siansa ary hahatratrarana izany vokatra izany mba hamerenana amin'ny laoniny ny fahatokisan'ny mpamokatra amin'ny fambolena an-trano.
Ireo mpiompy DOMESTA dia manana ny tombony azo amin'ny fifaninanana lehibe indrindra
Ireo mpandray anjara tamin'ny fotoam-pivoriana "Simia maintso sy zezika miaro ny tontolo iainana ho singa ilaina amin'ny fampandrosoana maharitra ny fiarahamonina", izay natao tao anatin'ny sehatry ny fampirantiana, dia niresaka momba ny filana hiantohana ny fiarovana ny tontolo iainana ireo vokatra fambolena.
Ny talen'ny jeneralin'ny PJSC Phos-Agro, Andrey Guryev, izay niresaka nandritra ny fivoriana dia niresaka momba ny drafitry ny Vondrona eropeana hampihenana ny fampiasana zezika fosforôla miaraka amin'ny habetsahan'ny cadmium, vy izay misy akony amin'ny vatan'ny olombelona. Manomboka amin'ny 2022, ny EU dia handràra ny fivezivezena zezika fosforô miaraka amin'ny atiny cadmium mihoatra ny 60 mg / kg. Mandritra izany fotoana izany dia namoaka tolo-kevitra momba ny tokony hampihenana ny votoatin'ny kadmium ho 20 milligrams ary latsaky ny taona 2020 ny maso ivoho ho an'ny fidiovana ara-tsakafo, tontolo iainana ary asa an-tsitrapo any Frantsa (ny firenena no mpanjifa betsaka indrindra amin'ny zezika phosfat any Eropa).
Raha nitodika tany amin'ny raharaham-pirenena isika, Andrei Guryev dia nanamarika fa ny zezika phosorosiana Rosiana dia novokarina avy amin'ny fôsatôzy vita amina magmatic, tsy manam-paharoa amin'ny fahadiovany, trandrahana ao amin'ny Saikinosy Kola; tsy misy poizina misy poizina izy ireo. Ny fampiasana ireo zezika ireo dia ahafahan'ny tantsaha mamboly vokatra azo antoka ho an'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​nefa tsy manimba ny tany.
Ny CEO PhosAgro dia nanamafy fa ny fahadiovan'ny zezika rosiana no fototry ny famoronana marika maitso ny vokatra fambolena rosiana, izay miantoka ny tsy fahampian'ny fiarovana ara-tontolo iainana ny vokatra amin'ity sehatry ny fambolena vaovao ity, manaraka ny tsipika famokarana iray manontolo: avy amin'ny fotodrafitrasa Rosiana amin'ny zezika mineraly ho an'ny mpamboly zava-maniry sy ireo sakafo additives mineraly ho an'ny fiompiana alohan'ny fivarotana sakafo amin'ny mpanjifa farany.
TETIKA FAMPANDROSOANA NY INDUSTRY CROP hatramin'ny 2025
Miaraka amin'ny resadresaka momba ny zezika, na ny tena marina, momba ny filàna fampitomboana ny fahavokarana amin'ny tany any Russia, ny kaonferansa "Tetika ho fampandrosoana ny indostrian'ny famokarana voly hatramin'ny 2025. Voka-pifidianana vonjimaika amin'ny taona 2019 ”. Roman Nekrasov, talen'ny departemantan'ny Production Crop, mekanisation, simika ary fiarovana ny zavamaniry ao amin'ny minisiteran'ny fambolena ny federasiona rosiana, dia nanamarika fa i Russia dia iray amin'ireo firenena vitsivitsy eto amin'izao tontolo izao izay manana fotoana fitomboana lehibe noho ny fananana tany, saingy ankehitriny, rehefa miatrika ny lahasa amin'ny fampitomboana ny volan'ny fanondranana ireo mpamokatra fambolena hatramin'ny $ 45 miliara hatramin'ny 2024, tena zava-dehibe ny fanamafisana ny famokarana isaky ny hektara. Ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny fanamafisana dia ny fampiasana zezika mineraly.
Araka ny lazain'i Roman Nekrasov, ny taona 2019 no taona voalohany tokony hampiaketan'ireo fikambanan'ny fambolena ao an-toerana ny habetsaky ny fividianana sy ny fampiasana zezika mineraly. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia mba hampiakarana ny mari-pamantarana ny vokatra any Rosia amin'ny haavon'ny firenena matanjaka indrindra dia ilaina ny mampitombo ny habetsaky ny zezika mineraly apetraka amin'ny 8,5 tapitrisa taonina amin'ny 2024.
Ny olana lehibe faharoa nipoitra tao anatin'ny rafitry ny kaonferansa dia mifandraika amin'ny fampiasana zezika: io dia mikasika ny filàna fampiakarana ny tahan'ny famafana ny rano asidra ao amin'ny firenena. Raha ny filazan'ny Ministeran'ny Fambolena ao amin'ny Federasiona Rosiana dia 33 tapitrisa hekitara ny tany asidra ankehitriny ao Russia. Amin'ny taona 2020, 1 lavitrisa roubles no hatokana amin'ny tetibola federaly hamatsy ara-bola ny fizotran'ny deoxidation. Ireo fikambanana misahana ny fambolena izay voarohirohy amin'ity faritra ity dia hahazo fanampiana, ary ireo izay hiatrika ny olana amin'ity taona ity dia afaka manonitra hatramin'ny 90% amin'ny vidiny.
FIVAROTANA FIVAROTANA HO AN'ILAY VOAFOMPO HAMPANDROSOANA
Ny adihevitra "Fampiroboroboana ny tsenan'ny varotra ho an'ny vokatra fambolena" dia namory ny tantsaha sy ny mpivarotra tao amin'ny efitrano iray.
Ny lahatenin'i Mikhail Abrosimov, talen'ny departemantan'ny Management Systems of the Magnit chain, izay nitondran'ny solontenan'ny iray amin'ireo rojom-pivarotana lehibe indrindra eto amin'ny firenena milaza fa nitady mpanamboatra vokatra eto an-toerana i Magnit, liana tamin'ny fiaraha-miasa mahomby ary misokatra amin'ny fifanakalozan-kevitra foana, tena nahaliana an'ireo mpamokatra fambolena.
Araka ny filazan'i Mikhail Abrosimov, ny tambajotra dia mikasa ny hanangana fifandraisana amin'ireo mpamokatra fambolena ao anatin'ny sehatry ny fifanarahana fambolena (2019 amin'izy ireo no vita sonia tamin'ny taona 55). Mandritra izany fotoana izany, "Magnit" dia tsy mandidy fotsiny ny tantsaha hamokatra karazana vokatra sasany, fa manampy ny toeram-piompiana hahita fahalemena amin'ny fandaminana ny asa (mifototra amin'ny valin'ny fanamarinana), manome fanampiana ara-bola ary miaraka aminy mandritra ny tsingerin'ny fitomboana. Misaotra an'io fa ny tambajotra dia mahazo ny entana atokisany, ary ny mpamokatra fambolena - tsena fivarotana azo antoka.
Nasongadin'i Abrosimov fa ny tambajotra dia mitady mpamatsy eo an-toerana izay mahazaka ny tahan'ny fitomboana napetraky ny tsena maoderina. "Magnit" dia vonona hanampy ny mpamokatra tantsaha hitombo, fa ho an'ireo izay mahay miteny fiteny iray ihany izy ireo, izay vonona ny hahita ny lesoka, manitsy azy ireo ary mahatratra bebe kokoa.
FAMPANDROSOANA NY POTATO SY NY VEGETABLE
Ity lohahevitra ity dia nampivondrona ireo mpandray anjara tamin'ny kaonferansa ny Vondron'ny ovy an'ny Federasiona Rosiana. Tao anatin'ny rafitr'ity fihaonana ity dia nanao kabary manan-danja maro: momba ireo karazany noforonin'ireo mpiompy an-trano ho an'ny làlan'ny fanodinana; aretina ovy vaovao izay tsy maintsy niadian'ny tantsaha tamin'ny vanim-potoana lasa; momba ny toe-piainana photositika any amin'ireo firenena lehibe mamatsy ovy voa ho an'i Russia.
Ny solontenan'ny orinasam-panodinana roa dia nizara ny valin'ny asany tamin'ny famokarana vokatra ovy. Yuriy Marchenko, talen'ny fividianana ny Agro Russia / Ukraine, dia niresaka momba ny zavatra niainan'i Pepsico, ilay mpanodina ovy lehibe indrindra ao Russia. Ny orinasa KRiMM, izay nanomboka niasa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana septambra 2019, dia natolotry ny tale jeneralin'ny orinasa Gennady Ryazanov.
Ary i Maxim Belyaev, filoha lefitra ary talen'ny departemantan'ny fampandrosoana isam-paritry ny Federasiona Restaurateurs sy Hoteliers any Russia, dia namintina ny valin'ny kilasy maodely nalamina niaraka tamin'ny Vondron'aty. Fampisehoana mahandro sakafo dia natao isan'andro nandritra ny fampirantiana, nandritra izany fotoana izay ny chef an'ny trano fisakafoanana ao Moskoa dia nampianatra ireo mpitsidika ny fararano Golden nahandro lovia voatokana, tany am-boalohany ary matsiro. Ny kilasy maoderina tsirairay dia misy fampahalalana mahaliana be dia be, ary samy vahiny sy manam-pahaizana manokana momba ny sakafo no nanao fikarohana ho an'ny tenany. Maxim Belyaev, ohatra, dia nanamarika fa nahatadidy karazana ovy mahaliana maro izy ho an'ny fandrahoan-tsakafo sy ny endasina, ary ny tena tsy fahita firy dia ny Jiro Avaratra - miaraka amin'ny hoditry ny lilac ary pulp volomparasy matroka manankarena. Raha ny fanazavana, zava-bitan'ny mpiompy an-trano io.
Tamin'ny fampirantiana agro-indostrialy "Golden Autumn-2019", niasa mahazatra ny komisiona fanandramana sy fifaninanana - ny manampahaizana dia nanombatombana ny zava-bitan'ny solontenan'ny indostria tamin'ny fanendrena maro. Ny valin'ny fifaninanana indostrialy 13 dia namintina. Manokana indrindra, ny zava-bita mahavariana indrindra dia voamarika tamin'ny famokarana vokatra vokatra sakafo avo lenta, ny fampiroboroboana ny tetiarana sy ny fiompiana biby fiompy, ny famokarana sakafo matanjaka sy additives, fanafody ary fiomanana amin'ny fampiasana veterinary, ny fambolena vokatra vokatra, ny fampivoarana ireo milina fambolena tena mahomby sy maro hafa.
Ho fanampin'izany, medaly sy diplaoma tamin'ilay fampirantiana dia nomena ny mpandresy tamin'ny fanendrena "Ho fampahalalana mahomby sy fanohanana ny torohevitra momba ny indostria agro-indostrialy", "Mba hahatratrarana vokatra avo eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana maharitra ny faritra ambanivohitra", "Ny toekarena tantsaha (fambolena) tsara indrindra", "Ny kaoperativa mpanjifa fambolena tsara indrindra" sns.
Tags: 2019 No. 4fampirantiana iray
Agritechnica 2022: foibe ara-barotra lehibe indrindra ho an'ny milina fambolena
Manomboka amin'ny 27 Febroary ka hatramin'ny 5 martsa 2022 ao an-tanànan'i Hannover, Alemana, dia hisy ny fampirantiana "Agritechnica 2022". Hiara-hientana bebe kokoa ny hetsika ...
Hatao ny Herinandron'ny AIC miaraka amin'ny fanohanan'ny minisiteran'ny Fambolena
Manomboka amin'ny 5 Oktobra ny herinandron'ny complexe agroindustrial, nokarakarain'ny Ministeran'ny Fambolena ao Rosia. 23 Fampirantiana agro-indostrialy Rosiana "Golden Autumn - 2021" dia hatao marina ...
Uzbekistan dia mampiditra indroa ny fanafarana ovy voa